Archive du 20190703
Ravalomanana sy ny TIM Nijoro ho mpanohitra ofisialy
Ofisialy ny maha antoko mpanohitra ny Antoko Tiako i Madagasikara (TIM). Tafapetraka omaly maraina teny amin’ny minisiteran’ny atitany ny taratasy ofisialy nosoniavin’ny filoha nasionalin’ny Antoko Atoa Marc Ravalomanana.
PM Ntsay Christian Lasa malok’endrika lava
Tsikaritra ho malomakaloka endrika ny praiminisitra Ntsay Christian tato ho ato ary toa miady irery ao anatin’ny fanjakana ao. Fantatra anefa fa salama tsara tsy marofy izy.
Nananatra ny filohan'ny HCC "Manetre tena, mihainoa ny vahoaka..."
Tsy niova firy tamin’ny voka-pifidianana navoakan’ny CENI ny vokatra ofisialy omaly.
Antoko TIM Nahatafiditra solombavambahoaka 16
Nahatafiditra solombavambahoaka miisa 16 ny avy amin’ny Antoko Tiako I Madagasikara na ny TIM tamin’iny fifidianana solombavambahoaka iny, araka ny vokatra ofisialy navoakan’ny HCC omaly.
Taratasin’i Jean Mandihy ny totozy
Salama ianao Jean ! Ireny izany ilay hoe mandihy ny Totozy fa tsy tao ny Saka a !
Fiombonam-po tamin’ny baolina Tokony hampiharintsika isan’andro, hoy ny CFM
Arahabaina isika malagasy nahavita ny asaramanitra ary mbola miondrika eo anatrehan’ireo vahoaka nidonam-pahoriana, hoy ny filoha lefitry ny komitin’ny fampihavanana malagasy na CFM, Gerard Ramamimampionona.
Nosy Sainte Marie Hatao laharam-pahamehana ny fiarovana ireo trozona
Hotontosaina ny 11 ka hatramin’ny 14 jolay izao any Sainte Marie ny hetsika “Festival des Baleines” andiany faha-5, raha ny fanazavan’ireo mpikarakara tetsy amin’ny minisiteran’ny fizahantany etsy Tsimbazaza omaly.
Fanohanana ny Barea any Egypta Hiampy ny fiaramanidina hitatitra …
Raha ny vaovao farany halina dia efa feno ny toerana 400 mahery ao anatin’ilay fiaramanidina goavambe Airbus A 380 ka hisy fiaramanidina fanampiny hitondra ireo
Barea JIOI sy Barea CHAN 2019 Hifandoana etsy Mahamasina amin’ny 07 jolay izao
Miatrika fampivondronana nanomboka tamin’ny 18 jona lasa teo ny Barean’i Madagasikara hiatrika ny JIOI “lalaon’ny nosy 2019”
Firafitry ny Barea amin’ny alahady Tsy maintsy miova
Tsy maintsy hiova ny firafitry ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra na Barea raha hiatrika ny ampahavalon-dalan’ny fiadiana izay ho tompondakan’i Afrika atao atsy Ejipta ny alahady izao.
Hazakazaka Manani-bohitra 2019 Harintsoa sy Eva no nahery teo amin’ny 42 km
Tontosa ary nifarana teny Ambohimanga tamin’ny sabotsy 29 jona teo ny hazakazaka Manani-bohitra 2019 nokarakarain’ny fikambanana Manani-bohitra notohanan’ny Telma ka nahazoam-bokatra tahaka izao :
Lafin-javatra roa no tena malaza, dia ny tontolo politika sy ny fanatanjahantena. Mazava be izany aloha izao ny fametrahana fifandanjan-kery ara-politika noho ny fanambaran’ny antoko Tiako I Madagasikara fa hijoro ho mpanohitra izy ireo.
Fanadinana CEPE sy BEPC Nihena ny isan’ireo mpiadina ho an’Antananarivo
Nisy fihenana ny taham-pandraisana anjara amin’ny fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC eto amin’ny fari-piadidiam-pampianarana Antananarivo ho an’ny taona 2019.
Ivankà Trump Nataon’ny olona fanalàna tao amin'ny Instagram
Niteraka resabe ny fihetsik`i Ivanka Trump, zanaka vavin`i Donald Trump filoha amerikanina, taorian’ny famoahany horonantsary mampiseho azy nanapaka ny resak’ireo mpitarika iraisam-pirenena nandritra ny fihaonambe tamin’ny G20 tany Japon.
Niteraka resabe ny fihetsik`i Ivanka Trump,
zanaka vavin`i Donald Trump filoha amerikanina, taorian’ny famoahany
Soudan Mihenjan-droa ny tady eo amin` ny miaramila sy ny sivily
Ny mpitondra miaramila dia mitaky dinika vaovao entina manitsy ireo andininy sasany ao anatin’ilay fifanarahana navoakan` ny mpanelanelana, tahaka ny vondrona Afrikanina .
Taham-pahafatesan’ny zaza latsaky ny 5 taona Ny faritra Atsimo Atsinanana no tena ambony
Raha zaza arivo no teraka dia 59 amin’ireo no maty mialoha ny fahadimy taonany, 21 maty eo am-piterahana.
CNaPS – Minisiteran’ny asa tany Mananjary Zon’ny Malagasy ny manana asa mendrika
Ny atao hoe “asa mendrika” dia fananana fiahiana ara-tsosialy sy fiahiana ara-pahasalamana ary miasa lavitry ny loza.
Fikambanana SoloKely Hisahana ny sosialim-bahoaka eny Ambohidratrimo
Ny sabotsy 29 jona 2019 teo no nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy teny amin’ny SLK Mandriambero ny fitsanganan’ny fikambanana FSK “Fikambanana SoloKely”
Carnaval MOTOCAN 2019 Hanohana ny BAREA ireo « 2 roues »
Hiray hina, hanohana ny Barea, izay ekipa Malagasy miatrika ny lalao baolina kitra mandritra ny CAN, ireo mpankafy “2 roues” na “moto” eto Antananarivo.
Toekarena sy Sosialy Mbola marefo hatrany i Madagasikara
Natolotra tamin'ny fomba ofisialy omaly 2 Jolay 2019 tao amin'ny Hotely Colbert ny tatitra voalohany momba ny valin'ny fanadihadiana momba ny toe-piainan’ny Malagasy amin’ny lafiny ara-toekarena sy ara-tsosialy mitambatra (MICS) natao teto Madagasikara.
BAD-Madagasikara Hakarina avo roa heny ny famatsiam-bola
“Izay firenena marefo sy tsy mahavita manarin-tena dia tsy tafiditra ao anatin`ny fikambanamben`ireo firenena te handroso vatsian`ny BAD saingy tsy anisan`izany i Madagasikara”, hoy ny filohan`ny Banky Afrikanina ho an`ny Fampandrosoana (BAD),
Voka-pikarohan’ny mpianatra Ahafahana manangana orinasa
Efa fanaon’ny mpianatra eny amin’ny sekoly ambony Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar (ISPM) Antsobolo ny maneho ny voka-pikarohana nataony mandritra ny taona.
Fandrosoan’i Rwanda Ny toe-tsaina mihitsy no niova
Manankarena ary fitaratra ho an’ny firenena afrikanina ny Rwanda amin’izao fotoana izao.
Fanafihana fiara RN7 Jiolahy iray voasambotra, 1 hafa lavon’ny bala
Teo am-panatanterahana fanafihana fiarakodia amin’ny lalam-pirenena faha-7, jiolahy 1 no azo sambo-belona ary lavon’ny balan’ny polisy ny iray hafa tao Mahavatsy Toliara I,
Tsy fandriampahalemana Omby 6 very nandritra ny fijerena baolina …
4 tamin’ireo omby very no efa tafaverina tamin’ny tompony raha ny fampitam-baovaon’ny zandary miasa ao amin’ny borigadin’i Sadabe.
Ambohidratrimo Mahazo vahana ny hala-botry
Mirongatra ny hala-botry an-tsaha sy an-tanana eny amin’ny faritra Ambohidratrimo, araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana.